YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 18
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/18/20102အကြံပြုခြင်း
18 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/f9gz2na18 March2010 Yeyintnge Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/18/20100အကြံပြုခြင်း
" ဆင်ဖြူတော်ဆိုတာ ခွေးတိုးပေါက်က မ၀င်ဘူး"
Yebaw Kyaw Than - Gate Mean for Dog and Saintly Elephant
ပုသိမ် - ချောင်းသာ ကားလမ်း ရှိ ကျောက်ချောင်းကြီး တံတား ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့
ပုသိမ်မှ ချောင်းသာသို့ သွားသည့် လမ်းပေါ်ရှိ ကျောက်ချောင်း ကြီးတံတား မှာ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ အချိန်တွင် ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ အဆိုပါ တံတားမှာ ချောင်းသာ ဘက်မှ လာသော ဘတ်စ်ကား တစ်စီး ဖြတ်ပြီးနောက် ကုန်ကား တစ်စီး ထပ်မံ ဖြတ်သန်း ချိန်တွင် ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကုန်ကားမှာ ချောင်း ထဲသို့ ပြုတ်ကျ သွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် တွေ့ကြုံ ခဲ့ရသူ တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
''ချောင်းသာကို အသွားပြန်လုပ်တဲ့ ကားတိုင်း ကျောက်ချောင်းကြီး တံတားကို ဖြတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ချောင်းသာက မတ်လ ၁၆ ရက် နေ့က ပြန်အလာ ကျောက်ချောင်းကြီး တံတား ဖြတ်မလို့ စောင့်နေ တုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကားရှေ့က ဖြတ်သွား တဲ့ကုန်ကားကြီးနဲ့အတူ တံတားကြီး တစ်ခြမ်း ပြိုကျ သွားပါတယ်။ တံတား က သစ်သား တံတား ဖြစ်ပြီး တံတား အဟောင်းပါ။ တံတား ပြိုကျ သွားတော့ ကုန်ကားကြီးက ချောင်းထဲကို ကျသွား ပါတယ်။ ပထမ တံတား တစ်ခြမ်း ပြိုကျပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ အ ကြာမှာ နောက်ထပ် တံတား တစ်ခြမ်း ကထပ်ပြီး ပြိုကျ သွားပါတယ်။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း ကတော့ ထိတ်လန့် စရာ ပဲ။ တော်သေးတယ် လူတွေ ဘာမှ မ ဖြစ်ဘူး''ဟု မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ချောင်းသာမှ ပြန်လာသူ တစ်ဦးက သူ ၏ တွေ့ကြုံ ရမှုများကို ပြောပြခဲ့ သည်။
ကျောက်ချောင်းကြီး တံတားမှာ တံတား အရှည် ၃၃၀ ပေရှိပြီး တံတား ခံနိုင်ဝန်မှာ ယာဉ် နှင့် ကုန် အပါအ၀င် ၈ တန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၈ . ၃ . ၂၀၁၀ l EM
မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၀
နအဖ စစ်အုပ်စုက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေကို ထုတ်ပြန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကိုဖွဲ့စည်းပြီး၊ အဲဒီ ကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်နေပါပြီ။
နအဖ က ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ နဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်နိုင်အောင် တားမြစ်လိုက်တဲ့ အပြင် သူတို့ အားလုံးကို ပါတီထောင်ခွင့်၊ ပါတီဝင်ဖြစ်ခွင့်တွေပါ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ ရက် ၆၀ အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အကျဉ်းကျနေကြသူ တွေအားလုံးကို ပါတီက ထုတ်ပစ်ပြီး ပါတီကို ကော်မရှင်မှာ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဖိအားပေးနေပါတယ်။
အဲဒီလို မလုပ်ခဲ့ရင်ပါတီဟာ အလိုအလျောက် ဖျက်သိမ်းပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ခြိန်းချောက်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မကြာမီ အချိန်အတွင်းမှာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ မတရားမှုတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ခေါင်းငုံ့ခံဖို့ တိုက်တွန်းနေကြတဲ့ အသံတွေကြားနေရပါတယ်။ ပါတီ တရားဝင် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် နအဖ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း ပါတီကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်သင့်တယ်၊ လူထုကို ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အရေးပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်တယ်လို့ အကြောင်းရှာနေကြတာလည်း ကြားရပါတယ်။ အဲဒီ အတွေးအခေါ်တွေကို တုန့်ပြန်ဖို့ ဒီစာစုကို ရေးပါတယ်။
(၁) ပြည်တွင်းက ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးသုဝေ က ပြောပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်တပ်က စနစ်တကျ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က နောက်ဆုပ်တာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသဘောတရားကိုပဲ အခွင့်ထူးခံ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်စု နဲ့ အလံနီဟောင်းတွေက တွင်တွင်ကြီး ဝါဒဖြန့်ချိနေတာ ကြာပါပြီ။
လုံးဝမှားပါတယ်။ တကယ်က စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို ထာဝရ ဆုတ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စနစ် တကျ ရှေ့တိုးလိုက်တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထာဝရ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်ဆောက်ဖို့ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်တာပါ။
နအဖ ရဲ့ အကြံအစည် က သူတို့ရဲ့ ဘိုးတော်ကြီး ဦးနေဝင်း ရဲ့ အကြံအစည် နဲ့အတူတူပါပဲ။ ကွဲပြားတာက လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်တွေက ဦးနေဝင်း ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ သူတို့ယူဆတာတွေကို ပြင်ဆင်ထားတာပါပဲ။
ဦးနေဝင်း က ၁၉၆၂ မှာ အာဏာသိမ်းပြီး ၁၉၆၄ မှာ မဆလ ပါတီထောင်တယ်။
တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ် ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲပြီး ၁၉၇၃ မှာ အတည်ပြုတယ်။
၁၉၇၄ က စပြီး ၄ နှစ် တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်တယ်။
နအဖ က ၁၉၈၈ မှာ အာဏာကို မဆလ အစိုးရထံကနေ လွှဲပြောင်းယူတယ်။
၁၉၉၃ ကနေ ၂၀၀၇ အထိ ၁၃နှစ်ကျော်ကြာ ထာဝရ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲတယ်။
၂၀၀၈ မှာ အဓမ္ဓအတည်ပြုတယ်။
အခု ၂၀၁၀ မှာ စစ်တပ်နှင့် လက်အောက်ခံပါတီများ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာပါ။
ဦးနေဝင်းက စစ်တပ်ကို ကျောထောက်နောက်ခံထားတဲ့ မဆလပါတီ ထောင်ပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမည့် အဲဒီ စစ်တပ်ပါတီထောင်ရေးကို အားနည်းချက်လို့ နအဖ ကမြင်ပုံရပါတယ်။ ဦးနေဝင်းက စစ်တပ်ကို အခြေပြုပြီး ပါတီထောင်တဲ့ အခါ အရပ်သားတွေကိုလည်း ပါတီထဲဖိတ်ခေါ်ရတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ဟောင်းတွေ၊ ကွန်မြူနစ်ဟောင်းတွေ၊ ပမညတ ဟောင်းတွေ က ဦးနေဝင်းရဲ့ မဆလ ပါတီထဲဝင်ပြီး ဦးနေဝင်းကို ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်က ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာကို ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တပ်တွင်းမှာလည်း ပါတီဝင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေနဲ့ ပါတီမဝင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေအကြား အမိန့်ပေးစနစ် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်တာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ အစပိုင်းလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း လူထုထဲက ယှဉ်ပြိုင်ရွေးကောက်ခံသူတွေပေါ်လာပြီး ပါတီက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို အနိုင်ရသွားတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
နအဖ က အဲဒီလို ပြန်အဖြစ်မခံတော့ပါဖူး၊ ဒီတခါတော့ စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်က ပါတီမထောင်တော့ပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ စစ်တပ်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာကုန်ပေးထားခြင်းဖြင့် စစ်တပ်ရဲ့ ရာသက်ပန်အာဏာပိုင်စိုးမှုကို စိတ်ချရအောင် ဖန်တီးထားလိုက်ပါတယ်။
ဦးနေဝင်းရဲ့ တစ်ပါတီစနစ်ကို ပြန်မသွားတော့ပဲ စစ်တပ် လက်အောက်ခံပါတီများကို စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများ၊ မဆလဟောင်းများ၊ ကြံ့ဖွံ့များ၊ လက်နက်ချပြီး ဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများ၊ အလိုတော်ရိစီးပွါးရေးသမား များနဲ့ ဖန်တီးပြီး စစ်တပ်နဲ့ စစ်တပ်လက်အောက်ခံပါတီများရဲ့ ပါတီစုံစနစ်ကို တီထွင်ဖော်ထုတ်လိုက်တာပါ၊
ဒါကိုပဲ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကနေ စနစ်တကျ ဆုတ်ခွါနေတာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၂) တချို့က လည်း နအဖရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေ ပေးထားတာမို့ ဒီ ဥပဒေ ကိုထောက်ခံသင့်တယ်၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်သင့်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါလည်း မှားပါတယ်၊ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ လူမျိုးစု ၆ စု အတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ၅ ခုနဲ့ တိုင်း တစ်ခု ဖန်တီးပေးထားပေမည့် အဲဒီ လူမျိုးစုတွေ တကယ်တမ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရကြတာ မဟုတ်ပါ၊ သူတို့ရဲ့ ဒေသဦးစီး အဖွဲ့တွေ နဲ့ တိုင်းဦးစီး အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့စည်းတဲ့ အခါမှာ စစ်တပ်က ခန့်အပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက ဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ ၂၅% ကိုနေရာယူထားမှာပါ။
ဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဥက္ကဌရာထူးကိုလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ဖာသာ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပါ။
အဲဒီ ဦးစီးအဖွဲ့တွေမှာလည်း စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသာ လုံခြုံရေး နဲ့ နယ်စပ်အရေးကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူကွပ်ကဲမှာပါ၊ ဦးစီးအဖွဲ့ ရှိနေပေမည့် တကယ်တမ်း အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စတွေကို မြန်မာပြည်မ က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာပါ။
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရဲ့ ဒေသတာဝန်ခံက ဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ယူပြီး တကယ်အုပ်ချုပ်မှာပါ။
တခါ ပြည်မက သမ္မတ က ခန့်အပ်တဲ့ တရားသူကြီးတွေက အဲဒီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရ ဒေသတွေ၊ တိုင်းတွေ ရဲ့ တရားစီရင်ရေးကို တာဝန်ယူမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒေသလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူမှာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရ တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ် တကယ်တမ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်စရာ ဘာမှ မကျန်တော့ပါ၊ စစ်တပ်ကပဲ အားလုံးကို အုပ်ချုပ်မှာပါ၊ ဒါကိုမှ ဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပေးထားတယ်လို့ ယုံကြည်နေရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
(၃) တချို့က ပါတီ တရားဝင် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် အဖွဲ့ချုပ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်သင့်တယ်၊ အဖွဲ့ချုပ် သာရွေးကောက်ပွဲရင် သေချာပေါက်နိုင်မှာပါ လို့ ပြောနေကြတာလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အကျဉ်းကျပါတီဝင်တွေ ကို ပါတီက ခဏထုတ်ပယ်၊ ပြန်ပြီး အသစ်မှတ်ပုံတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရအောင်လုပ်ပြီးမှ ထုတ်ထားတဲ့ ပါတီဝင်တွေ ကို ပြန်လက်ခံကြတာပေါ့လို့ စဉ်းစားနေကြသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
လုံးဝ မှားပါတယ်၊ နအဖ က ရွေးကောက်ပွဲကို သန့်ရှင်းမျှတ စွာကျင်းပပေးမှာ မဟုတ်ပါ။ တဖက်သတ်ရေးဆွဲပြီး အဓမ္မအတည်ပြုထား တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၊နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ ထုတ်ပြန်လိုက် တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ၊ နအဖ ဝန်ကြီးတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဏာတွေသုံးပြီး လုပ်နေတဲ့ ကြိုတင်မဲဆွယ်မှုတွေ၊ အလိုတော်ရိ စီးပွါးရေးသမား တွေကို ရန်ကုန်မြို့ကြီးက အဆောက်အအုံတွေ၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေ ခွဲဝေပေးနေတာကို ကြည့်ရင် သိလောက်ပါရဲ့။
နအဖ ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို ခံပြီး ပါတီ ကို ပြန်မှတ်ပုံတင်ရင်တောင်မှ နအဖ က အဖွဲ့ချုပ်ကို အကြောင်းပေါင်းစုံ နဲ့ လိုအပ်ရင် ဖျက်သိမ်းလို့ ရအောင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌန်းထားချက်တွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ ပြဋ္ဌန်းချက်တွေ အရ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အဖွဲ့ချုပ်ကို မတရားသင်း အဖွဲ့တွေ၊ သူပုန်တွေ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ၊ နဲ့ တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း ဆက်သွယ်တယ်လို့ စွတ်စွဲပြီး ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း နိုင်ငံခြား အစိုးရ များ၊ အဖွဲ့အစည်း များကနေ ထောက်ပံ့ငွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း ယူတယ်လို့ စွတ်စွဲပြီး ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း အဖွဲ့ချုပ်ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌန်းထားချက်တွေကို မလိုက်နာဘူး၊ ဖောက်ဖျက်တယ် လို့ စွတ်စွဲပြီး ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ်လည်း နအဖ က အဖွဲ့ချုပ်ကို မတရားသင်း အဖြစ် ကြေညာပြီး ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ပြေးမလွတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပါတီကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီးရင် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
ပြီးတော့လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များများစားစား တင်သွင်းခွင့် ရမှာ မဟုတ်ပါ။ နအဖ က ခေါင်းခေါက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အဖွဲ့ချုပ်က တင်သွင်းမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အများစုကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။
နအဖက အဖွဲ့ချုပ်ကို သူ့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာ က အသိအမှတ် ပြုရေးအတွက် လုံလောက်ရုံမျှ စတိလောက်သာ ဝင်ပြိုင်စေချင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဖွဲ့ချုပ်ဟာ အလွန်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ လောက်ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အနည်းငယ်တောင် နိုင်ချင်မှ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ရင်တောင် ကော်မရှင်က အနိုင်ရလာဒ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်နဲ့အားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်နေရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
လူထုကို လည်းလျှော့ မတွက်သင့်ပါ။ အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်းမှာ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရပေမည့် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။ လူထု အတွက် ဒီမိုကရေစီ ကို မတည်ဆောက်ပေး၊ မဆောင်ကျဉ်းပေး နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် နအဖ ရဲ့ အထုအထောင်း၊ အတိုက်အခိုက် တွေကိုသာ ခါးစည်းခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမည့်လည်း လူထုက သူတို့ကိုယ်စား တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံထားကြပြီး လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားတုံးပါ။
အဲဒါကိုမှ ဒီလောက် အရေးကြီးလှတဲ့အချိန်၊ နအဖ က သူ့ရဲ့ ထာဝရ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကို အပြီးသတ်တော့မည့် အချိန်မှာ၊ အဖွဲ့ချုပ်က နအဖ ဖိနှိပ်သမျှ လိုက်လျောပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်နဲ့ အကျဉ်းကျ ပါတီဝင်များကို ပါတီက ထုတ်ပယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြေညာထားတဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းကြီးကို လွှင့်ပစ်၊ နအဖ ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါ့မယ်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ့မယ် လို့ ကတိကဝတ် တွေပြုပြီး ကော်မရှင်မှာ ပြန်မှတ်ပုံတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရင်ဖြင့် ပြည်သူလူထုက ဒီပါတီကို သူတို့ကိုယ်စားပြု ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံမှာ မဟုတ်တော့ပါ။
လူထုကို သစ္စာဖောက်တဲ့ပါတီ၊ စစ်တပ်ရဲ့ လက်ဝေခံပါတီ၊ စစ်တပ်အလိုကျ ရပ်တည်ရတဲ့ ပါတီအဖြစ် ပဲ သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်တပ်အလိုကျ ရပ်တည်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီဟာ လူထုကို အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ဝေလာဝေး ဆိုတာ လူထုက ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ ဒီတော့ ငါတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင် အသေအချာ နိုင်မှာပဲ၊ လူထုက ထောက်ခံနေမှာပဲလို့ ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
“ငါတို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရင် လူထုမှာ ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဖူး၊ ဒါဆို နအဖ လူတွေပဲ နိုင်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့် လူထု ရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ဖို့ ငါတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ်” လို့ ဆင်ခြေပေးနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်၊ လုံးဝ မမှန်ပါ။
လူထုကို လျှော့မတွက်သင့်သလို အထင်လည်းမသေးသင့်၊ အသုံးလည်းမချသင့်ပါ။ လူထုက သူတို့ မယုံကြည်သူကို မဲပေးမှာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ယုံကြည်ခဲ့သူက မှားတဲ့ဖက်ရောက်သွားရင်လည်း သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါ။ သူတို့အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အဖြေမဟုတ်ဖူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိကြသူတွေပါ။
ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှာ မဟုတ်ဖူး၊ အသိအမှတ် ပြုခံရမှာ မဟုတ်ဖူးလို့ ခဏခဏပြောနေတာပါ။
အခု နအဖ က ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်အပြီးမှာ ဒီအသံတွေ က ပိုပြီး ကျယ်လောင်လာပါတယ်။
ဘယ်အစိုးရကမှ နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကို သဘောမတူပါ။ ဒီပုံစံအတိုင်း နအဖ က ရွေးကောက်ပွဲ ဆက်လုပ်မယ်၊ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း မပါဝင်ဖူး ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲက ထွက်လာတဲ့ ရလာဒ်ကို နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေက အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ လက်ခံဖို့ အတော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆို နအဖ က အသေအလဲ လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံရမှု (Legitimacy) နဲ့ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါ။
အဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ရင်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေက ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုရတော့မှာပါ။ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေ ရဲ့ စစ်တပ်အုပ်စိုးမှု တရားဝင်ပြုရေး အထူးစီမံကိန်းကြီး ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အဖွဲ့ချုပ်က နောက်ဆုံး အုတ်တစ်ချပ် စီဖြည့်ပေးသူ မဖြစ်စေချင်ပါ။
“နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလည်း ဘာတွေပဲပြောပြော နောက်ဆုံးကျတော့ အဖျားရှူးသွားတာပါပဲ “ လို့ ထင်ရင်လည်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေရဲ့ အားနည်းမှုက ပါတီ ပြန်မှတ်ပုံတင်ရေး၊ မတင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေး၊ မဝင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အကြောင်းပြစရာ မဖြစ်သင့်ပါ။ အဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်တုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာ တောင်းဆိုချက်ရ ထောင်တာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး၊ လူထုရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပါ။ အခုလည်း လူထု မျက်နှာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
(၄) နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဌာန် အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့ လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ ပေါ်လာတော့မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်လုံး ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အလံထောင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါ။
မကြာခင်မှာ ကျနော်တို့ဟာ ထာဝရ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုအသွင် ကူးပြောင်းရပါတော့မယ်။ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံး တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိဖို့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ အားလုံး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်း အတွက် ညီညီညွတ်ညွတ် ဆက်တိုက်ကြရမှာပါ။
အဲဒီလို နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဌာန် အသစ်ကို မပြောင်းခင် နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းကလေးမှာ ကျနော်တို့ အားလုံး နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို တခဲနက် ဆန့်ကျင်ကြဖို့ နဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေက အသိအမှတ်မပြုအောင် တောင်းဆိုဖို့ ရှိသမျှအားတွေ အကုန်သုံးပြီး လှုပ်ရှားကြရမှာပါ။
အဲဒီလို နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် မပြုအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဌာန်အသစ်ကို ကျနော်တို့ အားကောင်းမောင်းသန် ဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာပါ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံး တန်းတူညီမျှ ရေး လှုပ်ရှားမှူကြီးဟာ မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ဆက်ပြီး ခရီးဆက်ရပါဦးမယ်။
ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များဟာ လူထုနဲ့ အတူ ဆက်ရှိနေမှာလား ? လူထုကို ကျောခိုင်းသွားကြမှာလား?
"သေချာတာကတော့ စိတ်ကူးယဉ်နေဖို့ အချိန်မဟုတ်တော့ပါ"
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို အကောင်းဘက်က မြင်ကြည့်ခြင်း
၁၈/ မတ် ၂၀၁၀
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အောင်သီးအောင်ပွင့်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကတော့ အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံလိုက်ရပါပြီ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ အဓိကပြဿနာဟာ နအဖစစ်အုပ်စုက သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ၁၉၉၀ ရလဒ်ကို အကောင်အထည် ဖော်မပေးဘဲ လျစ်လျူရှုထားခြင်းပါ။ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်တိုင် အဲဒီ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို လက်နက်အဖြစ် ကိုင်စွဲပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး၊ အာဏာလွှဲပေးရေး ပြောဆိုရမယ့်အစား အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ခဲ့ရပါတယ် (ဘယ်သူမှားတယ်၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို အခုချိန်မှာ နောက်ကြောင်းပြန် စောကြောရမယ့်အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး)။
နှစ် (၂၀) နီးပါးမျှကာလအတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံ၊ ပါတီဆိုင်းဘုတ် မပြုတ်ကျရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မတရားဖမ်းဆီးခံ ဒီချုပ်ပါတီဝင်များ ပြန်လွှတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ … စတဲ့ နအဖ ဖန်တီးထားတဲ့ မှော်ရုံတောပေါ်မှာ တောင်းဆိုချက်၊ ကြေညာချက်တွေ တပွေ့တပိုက် သယ်ဆောင်ရင်း တ၀ဲလည်လည် လိုက်ပါမျောနေရာက အခု ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်မှာတော့ နိုင်ငံရေးလမ်းဆုံ၊ လမ်းခွသို့ တွန်းပို့ခံလိုက်ရပါပြီ။
ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ရေးအတွက် ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထုတ်ပယ်၊ အရင်က ကိုင်စွဲထားတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ မူလမ်းစဉ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ရပါတီ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူထုအပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ပွဲဝင်မလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါတော့မယ်။ အချိန်ကန့်သတ်ချက်ထားတာမို့ အရင်ကာလတွေလို ဖြတ်သန်းလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီတော့ နအဖ အခုလို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ကြိုဆိုဖို့ မသင့်သော် ငြားလည်း အနှစ် (၂၀) ကာလ ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် ရပ်တည်လာရတဲ့ အခြေအနေကို အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အကောင်းမြင်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေဟာ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်နေတဲ့ ကန့်သတ်ဘောင်များ ပါရှိနေလို့ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေအတွက် တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပိုရနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာ ထောင်ကျသူတွေ ၀င်ရောက်အရွေးခံခွင့် ရှိတယ်၊ ပါတီဝင် ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး ပါလာမယ်၊ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်ပါ့မလား။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ပါ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တောင်းဆိုချက်ကို နအဖဘက်က မလိုက်လျောပေးသရွေ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံဖို့ဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ပါတီရပ်တည်ရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်သင့်တယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာ လေသံအချို့ ထွက်နေချိန်မှာ အဲလိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကြောင့် ပါတီတောင် ကွဲနိုင်ပါသေးတယ်၊ မကွဲရင်တောင် အချို့ခွဲထွက်ပြီး အရွေးခံမယ့်လူတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ (အရင် အမျိုးသားညီလာခံကနေ ဒီချုပ် နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လွှတ်တော်အမတ်အချို့ ပါတီက စွန့်ခွာမှုမျိုးပါ)။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခိုင်းတဲ့အပေါ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကလည်း နအဖ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ကြိုဆိုချီးကျူး ထောပနာပြုမှုတွေတောင် လုပ်လာကြမှာဖြစ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေမျိုးတောင် ဆိုင်ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။
အခုတော့ နအဖဘက်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား စစ်ကြေညာတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး တွန့်ဆုတ်နေသူတွေ၊ ပါတီဆိုင်းဘုတ် မဖျက်ခံရရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ချင်သူတွေအနေနဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်လောက်ပါပြီ။
တကယ်လို့သာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မိရင်လည်း လူထုက မဲမပေးဘဲ ဒဏ်ခတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူထုက ယုံကြည်ကိုးစားထားတဲ့ ပါတီကနေ ဖောက်ပြန်လာတဲ့သူတွေ၊ တောခိုပြီးမှ လက်နက်ချလာသူတွေကို မြန်မာပြည်လူထုက ဆေးဖော်ကြောဖက် မလုပ်ကြလို့ပါဘဲ။ ဒါကိုလည်း သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ မကြာမီကာလအတွင်း ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မလွှဲမသွေ ချရပါတော့မယ်။ ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်း ပါတီရဲ့သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ အခက်ခဲဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ချရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာတခုကတော့ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ ထွက်ပေါ်လာမယ့် ကြေညာချက်ဟာ ဒီချုပ် စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက ထုတ်ပြန်ပြီးသမျှ ကြေညာချက်တွေထဲမှာ လူအများ စိတ်ဝင်စားမှုအဖြစ်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တပြိုင်တည်းမှာပဲ လူထုတရပ်လုံးကလည်း မိမိတို့ ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ရောက်နေချိန်မှာ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ဘယ်လို ၀န်းရံလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ ပြင်ဆင်ထားရတော့မယ့် အချိန် ကျရောက်နေပါပြီ။ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ ဘုရားသားတော် သံဃာတွေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း သွေးမြေကျခဲ့တုန်းက တကြိမ်၊ မိမိတို့ သားစဉ်မြေးဆက်တခုလုံးကို စစ်ကျွန်ဘ၀သွတ်သွင်းမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အလိမ်ခံလိုက်ရတုန်းက တကြိမ် ခေါင်းဆောင်ပျောက်နေလို့ နအဖ လုပ်သမျှကို ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ တအုံ့နွေးနွေး ခံစားနေရတဲ့ လူထုအနေနဲ့ မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ လက်တွဲဝန်းရံ ပါဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း မျက်မှောက်ခေတ်သမိုင်းရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ ထမ်းဆောင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်တွေပါ။
မီဒီယာတွေမှာ အချို့သော နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းက လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကတော့ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့် ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက် အချိန်ကာလ မပါဘူးဆိုတဲ့ အရေးမကြီးတော့တဲ့ ဟာလေး ဆုပ်ကိုင်ပြောဆို နေရုံဖြင့် မပြီးပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တကယ့်အာဏာက စစ်တပ်လက်ထဲမှာသာရှိတာမို့ အာဏာကော တကယ်လွှဲပေးမှာလား ဆိုတဲ့ သံသယတွေလည်း မထားသင့်တော့ပါ။ အဲဒါတွေက နအဖလုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချပြောဆိုတာထက် မပိုပါဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ရွေးမလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးမလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထုတ်ပယ် ပါတီရဲ့မူတွေ စွန့်လွှတ်ပြီး သိက္ခာမဲ့စွာဖြင့် ၀င်ရောက်အရွေးခံရင်ကော လူထုလက်ခံမှာတဲ့လား၊ လက်မခံလို့ မြောင်းထဲရောက်တာထက်စာရင် ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်မလဲ စတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မှာ ရှုတ်ချနေရုံနဲ့ ပြဿနာကို မကျော်လွှားနိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တကယ့်လက်တွေ့ပြဿနာက ဖွဲ့စည်းပုံအကျပ်အတည်း ဖြစ်လို့ပါပဲ။
တိုက်ဆိုင်မှုတခုကတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေး လက်မခံနိုင်တဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်ရေး ပြဿနာနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် … စတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ရေး ပြဿနာတွေဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အားနည်းချက် ပြဿနာအပေါ်မှာ အခြေခံတည်ရှိနေတာမို့ ပြိုင်တူတွန်းလျှင်တော့ ရွေ့နိုင်ကောင်းပါတယ်။ ။
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ မှ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး နှိုးဆော်ချက်
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ ( NCUM ) မှ ယနေ့ ( ၁၈ . ၃ . ၂၀၁၀ ) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး နှိုးဆော်ချက်
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ
နှစ်ခြမ်းကွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ယူဆမှုတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါးပါးနပ်နပ် ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်။
http://ifile.it/svqhynuRemember the Past. Final Doc
မဖြူဖြူ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေတက္ကသိုလ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ ရှင်းလင်းချက်
ပုသိမ် - ချောင်းသာ ကားလမ်း ရှိ ကျောက်ချောင်းကြီး တ...
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ မှ အမ...
နှစ်ခြမ်းကွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ယူဆမှုတွေကို...
မဖြူဖြူ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေတက္ကသိုလ်လုံးဆု...